नयाँ इतिहासको रचना « नेपाली मुटु
« उरुग्वेलाई पछार्दै नेदरल्याण्डस फाइनलमा
जर्मनीलाई सान्तवना जित »
Posted by नेपाली मुटु on July 8, 2010
अफ्रिकामा पहिलो पटक भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि अहिलेसम्म उपाधि नजितेको टिमले जितेर नयाँ इतिहास रच्ने पक्का भएको छ। जर्मनी र स्पेनबीचको अहिले भर्खर सकिएको सेमी फाइनल खेलमा जर्मनीलाई १-०ले हराएपछि स्पेन र नेदरल्यान्डसबीच उपाधिका लागि भिडन्त हुने भएको हो। यी दुवै युरोपेली टिमले अहिलेसम्म विश्वकप जितेका छैनन्। स्पेन पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो भने डच टिम ७० को दशकमा दुई पटक फाइनलमा पुगेर पनि उपाधिविहीन भएको हो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरुदेखि नै स्पेन र नेदरल्यान्ड्सबीच फाइनल होस् भन्ने मेरो चाहना र आशा व्यक्त गर्दा कतिले खिसी गरेका थिए। यस पटक इटाली, फ्रान्स, ब्राजिल, अर्जेन्टना, जर्मनी लगायत सबै परम्परागत टिम पाखा लागे र अन्ततः यी दुवै टिमबीच नै फाइनल हुने भो।
अनि यो परिणामले फेरि एक पटक अक्टोपसवाला अन्धविश्वासलाई बढावा दिने भएको छ। शतप्रतिशत अनुमान सही लगायो यो अक्टोपसले जर्मनीले खेल्ने सबै खेलमा। यस पटकका लागि भने अक्टोपस अन्धविश्वास समाप्‍त भयो भन्दा हुन्छ। अब एउटा तेस्रो स्थानका लागि खेल हुनेछ जर्मनी र उरुग्वेबीच। तर सबैको ध्यान भने फाइनलमा नै हुनेछ।
फाइनल जसले जिते पनि युरोपेली देशले आफ्नो महादेशबाहिर आयोजना भएको विश्वकप जितेको रेकर्ड त निश्चित भइ नै सक्यो।
नकआउट चरणका हरेक खेलमा चार गोल गर्दै आएको जर्मनीलाई आज सुरुदेखि नै स्पेनले दबाबमा राख्यो। थमस मुलर नभएर हो कि के हो, जर्मन टिमको त्यो आक्रामक शैलीको एक झलक पनि हेर्न पाइएन आज। अर्जेन्टिनासँगको खेलमा दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएपछि उनी आजको खेलमा निलम्बित थिए। खेलको सुरुवाती २५ मिनेटसम्म स्पेनले एउटा टार्गेटमा सहित तीन वटा आक्रमण गरिसक्दा पनि जर्मनीले स्पेनको पोस्टतिर एक पटक पनि कुनै किसिमको आक्रमण गर्न सकेको थिएन। पूरा खेलमा पोडोल्स्कीको एउटा आक्रमण मात्र डरलाग्दो थियो। विश्वकपमा बढी गोल गर्ने खेलाडीको नयाँ कीर्तिमान राख्‍न तर्फ अग्रसर क्लोसको त नाम पनि कमेन्टेटरले धेरै पटक लिएनन्।
जर्मन प्रशिक्षक जोआचिम लोले खेल अगाडि बोलेको कुराले नै शंका लागिसकेको थियो मलाई। उनले भनेका थिए- हामीले स्पेनको गल्तीबाट फाइदा उठाउनु पर्छ। फाइदा पक्कै उठायो, नभए कम्तिमा तीन गोल खान्थ्यो जर्मनीले। आक्रामक खेल्ने जर्मनीले डिफेन्समा खेलिरहँदा ७२ मिनेटसम्म स्पेनलाई रोकेकै थियो। तर ७३ औँ मिनेटमा पुओलले गरेको शानदार हेडरले पोस्टको जाली चुमेपछि जर्मन फेरि एक पटक निराश हुन बाध्य भयो। लगातार तेस्रो पटक सेमी फाइनल पुगेको जर्मनीले यसअघि २००६ को विश्वकपमा झैँ यस पटक तेस्रो स्थान कै खेल खेल्नु पर्ने भएको छ।
स्पेनीहरुले खुसी मनाउँदा जर्मन क्याप्टेन फिलिप लाहम आँसुमा डुबेका थिए। Bastian Schweinsteiger कयौँ मिनेट घुँडा टेकेर बसिरहे। गोलकर्ता पुयोलले सान्त्वनास्वरुप पिठ्युँ ठपठपाउँदा पनि उनी हलचल नगरी बसे।
भियनामा युरो कपको फाइनलमा हारेपछि जर्मन टिमले क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी युवा प्रतिभा जस्तै Mesut Oezil, Sami Khedira र गोल स्कोरिङ मेसिन भनिने थमस मुलररलाई स्थान दिएको थियो। यो टिमको गति र आक्रमण विश्वकपका अरु टिमहरुभन्दा फरक थियो। परम्परागत प्रतिद्वन्द्वीहरु इंगल्यान्ड र अर्जेन्टिनालाई चार चार गोलको दरले कूल आठ गोल ठोकेको थियो यही युवा जोसजाँगरसहितको टिमले र बदलामा खाएको थियो मात्र एक गोल।
तर आज स्पेनसँगको खेल भने खराब रह्यो- उही भियना मै खेल्दाको झल्को दिने गरी। इंगल्यान्ड र अर्जेन्टनासँगको खेलमा खतरनाक देखिएको प्रत्याक्रमण शैली स्पेनविरुद्धको खेलमा एक अंश पनि लागू नै भएन।
नयाँ र राम्रो टिमले विश्वकप जितोस् भन्ने इच्छा पूरा हुने भयो। फाइनलमा मेरो समर्थन अहिलेसम्म एउटै खेल नहारेको ‘सुन्तले’ टिमलाई हुनेछ। स्पेन पनि राम्रो टिम हो। राम्रो खेलेर उसैले जित्यो भने कम्तिमा एउटा नयाँ टिमले विश्वकपको उपाधि त जित्यो भनेर मन बुझाउने ठाउँ भने रहनेछ। तपाईँहरुको नि?
This entry was posted on July 8, 2010 at 6:49 pm	and is filed under विश्वकप बिशेष. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.